Ugbo ala ugbo | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ugbo ala ugbo
Ụdị anụ ọkụkọ nke anụ na-eri anụ: uru, ọghọm, atụmatụ
Onye oru ugbo obula, nke nwere ulo nke aka ya, nwere ike igbakwunye umu anumanu a na abuo di na abuo umu ulo. E nwere ọtụtụ ụdị nnụnụ ndị a na ụzọ dị iche iche. Ugbu a, e nwere ihe karịrị otu narị ụdị ọkụkọ na mmepe nke ulo ozuzu okuko. Dabere na ntụziaka ugbo, ha kewara ekewa.
Kedu ihe na-akpata ọnwụ nke ndị na-eti mkpu?
A na-azụkarị ọkụkọ broiler n'ọhịa ugbo. Ndị agha na-enweta ntanye akwa maka broeding ozuzu. Mgbe ụfọdụ, ndị nwe ha na-azụta ọkụkọ n'onwe ha, ma n'echi ya, ha na-achọta otu ma ọ bụ karịa ndị nwụrụ anwụ. Kedu ihe kpatara ihe ndị dị otú a, anyị ga-agbalị ịghọta isiokwu a?
Ọrịa ọrịa na usoro nke ọgwụgwọ ha na igbochi
N'oge a, ozuzu ozuzu bu ahia ahia. Ma, dị ka anụ ụlọ ọ bụla, ọkụkọ na-ebute ọrịa dị iche iche. Nsogbu kachasị mkpa na mmepe nke ugbo ozuzu bụ ọrịa ọkụkọ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na ọrịa ndị dị oké njọ dị njọ, bụ nke ị ga-egbutu anụ ụlọ niile.
Ndị nna nna anyị bụ ezi mmadụ mgbe ha kụziiri ọkụkọ na ájá! Malite site na ogige obodo mbụ, na mpaghara mpaghara ugbo, ha ga-egosi gị na nke a bụ azụmahịa dị nnọọ mma. Ọkụkọ abụghị nanị afọ ọhụrụ na-abụghị GMO anụ na tebụl, kamakwa nsen. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite azụ ọkụkọ ozuzu, ma ị maghị ụdị ụdị ị ga-ahọrọ, mgbe ahụ, ọkụkọ Zagorsky salmon bụ ihe dị gị mkpa.
Taa, ozuzu ozuzu bu ihe a ma ama. Ọ na-enye gị ohere iri nri mgbe nile, anụ ahụ, anụ dị ọcha na àkwá. Ma, ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ọkụkọ ozuzu Brahma, ọ ga-eweta afọ ojuju afọ ojuju. N'ezie, ụdị ìgwè ọkụkọ a ga-abụ mma nke nnụnụ ọ bụla. A na-asọpụrụ ha mgbe niile site na agba agba mara mma, ọnọdụ dị nro, nke kwesịrị ekwesị, ndị isi, ntachi obi.
Ịmụta ime oghere maka quail onwe gị
Ịzụlite ma na-eto eto quails n'ụlọ bụ azụmahịa dị mma. A sị ka e kwuwe, obere nnụnụ ndị a na-eri obere nri, ma n'otu oge ahụ, ha dị akwa ma nye ọbụna obere anụ, mana o nwere nnukwu uru. Idebe quails abụghị ihe isi ike, ebe ọ bụ na ha nwere ike ibi n'ụlọ, ma ọ bụrụ na ị na-ewuru ha ogige pụrụ iche.
Ọ bụ ezie na taa, ọ dị mfe ịchọta ụdị iri na abuo na ụdị ọkụkọ, nke a na-ahụ maka ezigbo arụpụtaghị ihe, ma ụdị anụ ọhịa a maara nke ọma anaghị efu ha. Karịsịa, otu n'ime ndị a bụ Leggorn hens, bụ nke a marala ọtụtụ ụwa maka ọtụtụ afọ maka ọdịmma ha.
Ụdị ọkụkọ Kuchinsky ọkụkọ
Ọtụtụ ndị na-etinye aka na ọkụkọ ozuzu, n'ihi na nke a abụghị azụmahịa aghụghọ, ma nke ahụ na-enye aka dị ukwuu n'ibelata mmefu site na mmefu ego onwe onye. N'otu oge ahụ, ndị ọrụ ugbo a na-anụ ọkụkọ nke oge a amụtaworị na mmụta dị irè nke azụmahịa a ga-adabere na ọ bụghị ọnụ ọgụgụ nri na nlekọta nnụnụ, kamakwa na oke oke nke oke.
Mbibi na ulo okuko, gini maka? Kedu ụdị ọnyà ndị dị n'ebe ahụ?
Onye ọ bụla na-eche na ọ wuru ụlọ ahụ n'onwe ya, ma ọ bụghị ya, ọ ka dị mkpa iji kwadebe ya na ngwá ọrụ ndị dị mkpa. Ikekwe ị na-eche na ọ dịghị ihe siri ike na nke a, kama iji wuo perches, nests, ime ka ọkụ na ventilashion. Ọ bụrụ na ịmee ihe ọ bụla na-ezighị ezi ma ọ bụ tụfuo ihe, mgbe ahụ, nnụnụ gị nwere ike ịkwụsị ngwa ngwa, nke na-adịghị mma.
Ndị na-aṅụ ihe ọkụkọ ma na-eme-ya-onwe gị
N'elu ihe niile echere na oge dị iche iche n'afọ ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ọhụrụ. A gaghị enwe nsogbu ịzụta anu anụ ọkụkọ. Ma, ndi oru ugbo na-eto eto di iche iche na anu ulo n'ime mkpo ha. Ha niile ga-agwa gị na ngwaahịa ndị a na-enweta n'ụlọ nwere ọtụtụ ihe na-abawanye uru karịa na ụlọ ahịa.
Ndị ọkụ ọkụ ọcha Russia
Ogologo mgbe nne okuko bu enyi nke mmadu. Ụdị ọkụkọ, ọcha ndị Russia, bụ otu n'ime ụmụ anụ ndị kachasị azụ n'etiti ndị CIS. N'ihi aha ya, ị nwere ike izute ya na anụ ugbo na ezinụlọ, na ngwaahịa ha na ụlọ ahịa. Ndị nkuzi maka afọ 20 dugara ọrụ na okike nke ụdị a.
Kedu ihe dị oké ọnụ ahịa ọla na-acha odo odo?
Bronze dum-breasted turkeys bụ ndị kasị ibu nnọchiteanya nke turkeys. Nke a bụ ọdịiche ha dị ukwuu site na ndị agbụrụ. A na-azụ ìgwè ahụ na America maka ịzụlite ụlọ ọrụ mmepụta ihe. O mechara nweta mgbasa ozi n'ihi na o nwere ọtụtụ uru ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha, bụ nke uru nke ịzụlite ha dị elu.
Nkọwa nke ụdị ewu kachasị ewu ewu nke nduzi Adler ọlaọcha ọkụ
N'etiti ọtụtụ ụdị ụdị dị iche iche, ụdị na umu obere ọkụkọ nke ọkụkọ, ọ na-esi ike ịhọrọ ihe ruru gị ala. Ya mere, ịkwesiri ịnyagharị ọ bụghị n'aha, kama site n'ụdị ntụziaka nke arụpụtaghị ihe. E kwuwerị, nke a bụ kpọmkwem ihe ị ga-azụ ụmụ anụ ụlọ gị. Dịka ọmụmaatụ, ntụziaka kachasị ewu ewu bụ anụ-anụ, nke na-enye gị ohere ijikọta ọnụ ọgụgụ dị ọkụ nke ọkụkọ na nnukwu àgwà nke ọkụkọ ha na-emepụta.
Ụdị nke poltava hens: anyị na-adabere na arụpụta ọrụ na ịdị mfe nke nhazi
N'ebe anụ ọhịa, ụdị anụ ọhịa dị iche iche dị mma nke anụ ụlọ, nke a na-ekepụta site na ịgafe ndị nnọchiteanya nke otu ụdị ahụ. Dị ka usoro, a na-eme nke a iji mee ka arụpụta ihe ma ọ bụ àgwà ndị ọzọ dị mkpa. Mgbe a na-azụlite ụdị ọkụkọ ọhụrụ, ọrụ kachasị mkpa na-arụ ọrụ site n'ichebara akwa na anụ anụ ha, bụ ndị bụ isi nchịkọta maka ịhọrọ nnụnụ iji nwekwuo ozuzu.
Chickens Rhode Island: kedu ihe dị iche iche na uru nke ụdị ahụ?
Ịzụlite ọkụkọ dị ezigbo uru. A sị ka e kwuwe, ekele maka nnụnụ ndị a n'ụlọ gị ga-abụ anụ ọhụrụ na nri dị ụtọ, bụ nke dị mma karịa ndị na-ere na nnukwu ụlọ ahịa. A sị ka e kwuwe, otu ezinụlọ na-ekwenye ekwenye na ịdị mma na nchebe gburugburu ebe obibi, nke ndị ọkachamara na ndị ọkachamara PR na-agbalị iṅomi ya n'ụzọ dị egwu na teknụzụ telivishọn.
Anyị na-enweta ma na-ata anụ ahụ bụ Sussex na-amụba n'ogige nke ha
N'ụlọ, ọkụkọ malitere ịmịlite ọbụna ogologo oge tupu mmalite nke oge anyị, ya mere ọtụtụ ụdị ụmụ anụmanụ nwere ogologo oge nke mmalite, nke enweghị ihe jikọrọ ya na ịzụlite anụ. E kwuwerị, iji nweta anụ ndị ọzọ na anụ ngwaahịa, ọbụna ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụkọ n'oge ochie gbalịrị ịhọrọ nanị ihe kachasị mma ma mezie ha.
Esemokwu na atụmatụ nke ọkụkọ bearded ojii
Chickens - otu n'ime ulo ozuzu kachasị mma. Ha nwere ikike imeghari na ọnọdụ dịgasị iche iche, na-enwe obi ụtọ na anya na agba mara mma ma na-enye ndị nwe ha nri dị ụtọ ma dị mma - nsen, anụ na ala. Ọ bụ ezie na taa, ọtụtụ ndị na-amalite ịhapụ ụlọ ụlọ, ọkụkọ ka na-abụ ndị enyi kachasị ntụkwasị obi nke mmadụ.
Wyandot Chickens: Nchikota mara mma na ịrụpụta ihe
Ọkụ dị n'etiti nnụnụ mbụ ndị mmadụ na-achịkwa. Ha na-eweta uru ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha, ebe ọ bụ na ha na-enye ohere ịnata ọ bụghị naanị oke zuru oke nke anụ dị ụtọ ma dị nro, kamakwa n'oge ndụ ha iji nye ndị nwe ya nsen ahụ. Ọbụna ndị nke oge a, ndị na-anwa ime ihe ọ bụla iji kwado ndụ ha ma hapụ ịzụ anụ ụlọ, kpochapụ ọkụkọ na ọ dịkarịa ala.
Esi kwadebe ụlọ maka ịmalite indoutok
Ọbọ Muscovy, nke bụkwa anụ ụlọ anụ, bụ nnukwu anụ ọkụkọ. Na mbido, ọgba aghara dị na Meksiko na South America dum. Ndị Aztek oge ochie nwere ike ịkụzi nnụnụ a, ma ndị mmeri Spanish meriri ya gaa Europe, ebe o si gbasaa n'ụwa niile.
Akụrụngwa musk ozuzu na-ezuru ha n'oge okpomọkụ ha
N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ na anụ ọkụkọ ozuzu, onye nwe ọ bụla ga-agbakọọ uru nke ịchebe ụfọdụ ụdị na ụdị ụmụ anụmanụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-azụ anụ ọhịa na ọkụkọ iji nweta nsen, ndị ọzọ na-elekwasị anya n'inweta anụ. N'isiokwu a, anyị ga-aṅa ntị na ọdịdị nke Indo-ducks na-azụlite - a ụdị nke anụ ahụ na-eduzi.